Ịmụta + Na - arụ ọrụ - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Gụọ ebe nrụọrụ weebụ anyị na asụsụ nke aka gị
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ịmụta + arụ ọrụ
Ịmụta + na-arụ ọrụ (nkuzi oge-oge)
Debanye na agụmakwụkwọ oge-oge
ma malite ngwa ngwa.
Ị nwere ike ịbanye mmụta na ịrụ ọrụ n'oge ọ bụla n'afọ afọ akwụkwọ.
The modular usoro nwere ike na ọtụtụ gụsịrị akwụkwọ na mmemme mgbe ọ bụla nke akwụkwọ afọ.
Ịmụ na Ịrụ ọrụ na DBSO Antwerp bụ ụdị nke mụta abụọ.
Ị na-aga ụbọchị abụọ n'ụlọ akwụkwọ ma rụọ ọrụ ụbọchị atọ. Ya mere ị na-arụ ọrụ ụbọchị ise n'izu.
Ị mụtara ọrụ na ị nwekwara ike inweta diploma.
Ihe ọmụmụ ndị ahụ dị mma. Nke a pụtara na ị ga-abụ ọkachamara na mpaghara gị site na nkwụsị. Mgbe ọ bụla, ị ga-enweta ihe akaebe nke ihe ị nwere ike.
N'ụlọ akwụkwọ, ndị nkuzi gị ga-elekọta gị. I nwekwara onye inyeaka ọrụ nke bụ otu
Ị mụtara ọrụ na ụlọ akwụkwọ na ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwetala ụfọdụ ihe ọmụma, ị ga-enweta akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịnwe akwụkwọ ikikere zuru oke, ị ga-enweta akwụkwọ ikike ọkachamara.
Ọtụtụ ihe omume iri abụọ ruo afọ anọ.
Onye ọ bụla na-eto eto na-amụ ihe na ya onwe ya. Ogologo oge nke ọzụzụ gị adịghịzi edozi tupu oge eruo. Ihe niile ị na-amụta na ọrụ gị dịkwa mkpa na ụlọ akwụkwọ.
Ị ga-enwe ọganihu gị na onye nkụzi gị kwa izu ka ị mara ihe ị ga-amụta.
Nweta diplọma gị
Ị nwere ike inweta akara ugo mmụta sekọndrị n'etiti anyị.
Ị na-eso ndị isi n'ozuzu otu ụbọchị n'izu. Usoro ihe ọmụmụ a yiri nke BSO na agụmakwụkwọ oge nile.
Anyị na-ahazie ihe ọmụmụ ndị a n'ụzọ dị mfe. Nke ahụ bụ, ị gụsịrị akwụkwọ ozugbo i nwetara ihe niile. Ị ga-agụsị akwụkwọ n'oge ọ bụla n'afọ afọ akwụkwọ.
Ọ bụla na-eto eto onye na-amụta na ya jiri nwayọọ nwayọọ na-eso onye omume. I nwere ike na ya mere "nọdụ".
Ọ bụrụ na ị debanye aha na etiti anyị, ị dee ederede ntinye. Site nyocha a, ị na-egosi ihe ị nwere ike ime. Ihe niile ị nwere ike ime, ịkwesighi ịmatakwu ihe. Ya mere, ị nwere ike ịchọta ihe maka isiokwu a. Kwa izu, ị ga-ahụ ihe ị ga - achọ ka gị na onye nkuzi gị mụọ.
L & W nwere ụlọ klas ọhụrụ
Site 1 September 2017 nweta ụfọdụ nke ihe ọhụrụ ogige na-ewu ụlọ ọhụrụ ahụ gafee okporo ámá. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà mmụta sayensị nọgidere na-etinye aka n'ịdị mma nke ọmụmụ ihe anyị na iji meziwanye akụrụngwa anyị.
N'ụlọ ọhụrụ ndị ahụ, akara 3 na "diploma +" nke Ịmụta + na-eso PAV nkuzi.
Ọzụzụ nke Ịmụ Ihe + Na-arụ ọrụ
Nchịkwa & IT
Ngwaahịa & Ahịa
NTỤKWU NDỊ // DBSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ị mụta otú e si ahazi ihe omume egwuregwu ma na-eduzi ndị na-eto eto na ọrụ agbata obi na mkpakọrịta mpaghara. Ị ga-amụ banyere ihe eji egwu na ihe egwuregwu ma mụta otu esi akpali ndị na-eto eto ime ihe. Ị ga-enweta ihe ọmụma bara uru banyere ịmalite ọkụ, ihe oriri, mmekorita, nke otu ìgwè, yana enyemaka mbụ. Ị mụtara site na ịlụ ọgụ na egwuregwu bọl. The egwuregwu ọzụzụ nlekọta na akụkụ-oge mmụta bụ naanị egwuregwu ọzụzụ BSO larịị.
Ị ga-ahụ maka ịnweta, ijikwa ekwentị, na-edezi mail, ịrụ ọrụ nchịkwa, na-elekọta otu klas, na-eme ọrụ nkwado na nzukọ, na-arụ ọrụ ọfịs na-akwado.
Ị mụtara otú e si ewu kọmputa ma kwadebe ha maka ojiji. Ị mụta otú e si arụnye PC ndị a na ndị na-emetụta ya (ma ọ bụ na gburugburu netwọk) ma weghachi ha. Na mgbakwunye na ngwanrọ ịmara ngwanrọ na ngwaike, ị ga-enwetakwa nkà ahịa na ihe ọmụma gbasara ihe gbasara ọrụ eletriki.
Ị na-etinye onwe gị n'èzí nke ụgbọ ala. Ị mụta otú e si arụzi mmebi dị mfe nke ọrụ nke ugbo ala. Ị mụta otu esi arụ ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche, wepu ma kpoo ma kpofuo akụkụ ụgbọ ala, weld na solder, tap na ájá. Ị mụtara ịmepụta àgwà ọma ma jiri nlezianya kpaa ahụ. Ọzọkwa ị nwekwara ike ịmụta banyere Chassis, engines, ọrụ nchekwa na akpakanamde ọkụ eletrik.
Formwork - formwork - arụ ọrụ
Ị na-amụta ihe niile gbasara ịwụnye kpo oku na ebe dị ọcha. Ị na-amụta ihe niile gbasara nsị. Anyị na-akwadebe gị maka ọrụ na ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ ma ọ bụ na a na-atụgharị. Ọzụzụ a na - emezigharị ọrụ ọkpụkpụ.
Ihe omume a chọrọ ime ka ị bụrụ ọkachamara na-arụ ọrụ / kpakpando. Ihe omumu nile na-akuzi gi ighota ma mejuputa ihe ndi ozo di mfe n'isoro ntuziaka nchedo.
Ị mụtara ịtọlite, rụọ ọrụ ma hichaa ígwè ọrụ ọkụkụ dịgasị iche iche, ị na-amụta iji ọrụ aka. Ị na-arụpụta ụlọ dị iche iche, oche na oche maka iche iche dị iche iche: kichin, ime ụlọ ịwụ ahụ, ịzụ ahịa ahịa, ile ọbịa, ọfịs na bench, mma ime.
A (aka) onye na-elekọta ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ahụ. Anyị na-akụziri gị otu esi enyere ndị ahịa gị aka, otu esi edozi tebụl na otu esi akwụ ụgwọ mgbe ị risịrị nri. Ị na-amụtakwa otu esi eje ozi na mmanya. Ị na-arụ ọrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Mụta ihe niile banyere nri; ịkụcha akwụkwọ nri, ịkwadebe ihe oriri ma jikọta menu. Ọzụzụ ahụ gụnyere ma nri oyi na ọkụ. Ị ga-amụta otú e si akwadebe ihe oriri. Ị maara na anyị na-akụzikwara gị otu esi esi nri anụ ọhịa, anụ anaghị eri anụ na vegan?
Ụgbọ elu ụgbọala na-agba ọsọ
Ị mụta otú ị ga-ebu ibu, kwatuo ma debekwa ngwaahịa na nkwakọba ihe site na iji ụgbọ oloko. Na mgbakwunye, ị na-amụta ịkwado iwu site na kọmputa site na ịkwadebe ngwaahịa. Ọrụ nkịtị na-anọgide na-adị mkpa na ụlọ nkwakọba ihe. Ọrụ ụlọ ahịa dị nnọọ mma ma chọkwara ka gị na ndị ọrụ ibe gị rụọ ọrụ nke ọma.
Ị mụta ịnabata ngwongwo n'ụzọ ziri ezi, ibu, kpochapu ma kpochapu. Ị ga-amụta otu esi edozi, ịlele, kwadebe maka mbupu, ịkwaga na ịchekwa. Iji mee nke a, ị ga-amụta iji ngwaọrụ ndị dị ka transpallet ma ọ bụ ekwensu na ịkwado ihe ndị dị ka pallet, igbe, mkpuchi, .... Ị ga-amụtakwa otu esi echekwa n'enweghị nsogbu ma rụọ ọrụ nke ọma na otu esi agụta, iṅomi ma deba aha ndị ahụ. N'ikpeazụ, ị ga-amụta ịlele na mezue akwụkwọ ndị kwekọrọ.
Onye na-ere nkà na ụzụ
Ihe e mesiri ike n'ọmụmụ ihe a bụ ọrụ dịka onye ahịa - onye ahịa na nzụlite ọrụ. Ị mụtara iji aka ahịa. Ị na-azụ na onye na-azụ akwụkwọ oge-oge ka ị ga-esi ekwurịta okwu nke ọma. Ị ga-amụta usoro ngosi na usoro ahịa na ịchọta nghọta ahịa na ihe ọmụma ngwaahịa.
Ihe e mesiri ike na nke a bụ ọrụ dịka onye ahịa - onye ahịa na ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa nri. Ị mụtara iji aka ahịa. Ị na-eme ezi nkwurịta okwu. Ị ga-amụta ihe ngosi na ahịa usoro. Ị nweta nghọta azụmahịa na ihe ọmụma ngwaahịa.
Ị na-amụta weld n'ụzọ na-enweghị isi na n'ụzọ dị mma maka ebe nchekwa maka ịgbado ọkụ na electrode / MIG-MAG na TIG. Ị na-arụ ọrụ na igwe akụrụngwa na-arụ ọrụ na aluminum ma ọ bụ (igwe anaghị agba) ígwè ma mụta ihe dị iche iche. Ị mụtara iji ngwaọrụ ndị ahụ dịka ntụziaka nke onye ọrụ ahụ si dị.
NTỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ị mụtara ịrụ ọrụ na ụmụ ọhụrụ, ụmụaka na-eto eto ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ praịmarị. Ị na-arụ ọrụ na nhazi ma ọ bụ na ị na-abanye maka nlekọta ụlọ akwụkwọ na mgbe ọ gasịrị. Mgbe ụfọdụ, ị na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ebe ị na-akwado nkuzi nke ndị na-eto eto ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ praịmarị.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Ụlọ Ọrụ
Ọrụ ndị e ji arụ ọrụ na mpaghara ebe a na-elekọta ndị agadi na ụlọ ọrụ nlekọta na-ahụ maka ọrụ ndị a na-ede ede. Ị na-amụta na ọzụzụ otú ị ga-esi ehicha ụlọ, ị na-eweta nri ma na-eso ndị agadi na-eme ihe. Ndị ọrụ a na-edebanye aha anaghị eme ọrụ ọ bụla na-elekọta.
A na-elekọta nurse anamde isi ihe aga-eme na-enye nwa ara obibi na clinics. Ị na-enyere ndị agadi na ị na-eduzi ha. Ozugbo ị mezue a N'ezie i nwere ike ipuiche n'ihu dị ka Nursing Inyeaka.
A ahụike ọkachamara nwere ike na-arụ ọrụ n'adabereghị na a nọọsụ ma ọ bụ ezumike nká ufọk. Ọ bụrụ na ị mezue a N'ezie ị ga-enweta visa of Nursing Inyeaka. Ị nwere oké ohere na-arụ ọrụ.
Ọzụzụ a bụ ihe ọhụrụ! Ị mụtara ịrụ ọrụ na ndị na-eto eto na ụmụ akwụkwọ primrị. Na nke a, ị ga-amụta nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ịmepụta ihe na nyocha.
Ịkụzi oge na-arụ ọrụ
IKPEHE-TIME MMUTA: Explained
Smart ụdịdị dị iche iche Ụlọ akwụkwọ akwụkwọ
arụ ọrụ na-amụta
MMUTA IKPEHE-TIME .... karịa zuru!
Ị na ikpokọta na-amụta na-arụ ọrụ. Dual mmụta bụ na akụkụ oge ọzụzụ n'etiti. Ị na-enweta otu ụbọchị nke agụmakwụkwọ niile na otu ụbọchị nke ọzụzụ ndị ọkachamara n'ụlọ akwụkwọ. Ị ga-amụ banyere ụlọ ọrụ ahụ maka ụbọchị atọ. Ya mere ị na-arụ ọrụ oge niile!
N'ime usoro a, ị nwere ike ịgbaso usoro ọmụmụ dị iche iche n'ime ụlọ ọrụ, STEM, Sport, Logistics, Catering and Care. Na mgbakwunye na ọzụzụ na agụmakwụkwọ oge ụfọdụ, anyị na-enyekwa nlekọta zuru oke maka onye ọ bụla. Anyị na-elele nke a iche iche maka nwa akwụkwọ ọ bụla. N'ụzọ dị otú a ị ga-enweta enyemaka onye ọ bụla ebe ị nwere ike ịzụlite onwe gị na nkwụsị gị.
Usoro a nwere ike site na 15 ruo afọ 25. Ị ga-agwụla ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ nke agụmakwụkwọ oge nile.
Part oge mmụta dabara nke ọma na ọrụ ahịa. Anyị na-akwadebe na-eto eto maka a otu ebe ọrụ na a mụ na ala ego.
IKPEHE-TIME Ozizi ANTWERP
Ụdịdị dị iche iche School ọnọde onwe ya dị ka a àgwà na-eweta nke akụkụ oge mmụta Antwerp. Anyị itinye oké mkpa iji oge nile nkwa. Nke a pụtara na anyị na-agbalịsi iji hụ na onye ọ bụla nwere na-arụ ọrụ; ọkacha mma na a mgbe nile na-akwụ ụgwọ ọrụ. Na akụkụ-oge mmụta Antwerp anyị dị iche n'ihi na anyị ka nwere ndị kasị elu ọrụ udu. Nke ahụ bụ n'uru nke ụmụ akwụkwọ anyị na nke anyị ọrụ ndị ndụmọdụ.
Anyị na-ahazi anyị ọmụmụ akụkụ-oge mmụta na Deurne-Antwerp. The n'ọrụ anyị na-arụ ọrụ na ị na-ahụ ihe niile na ógbè Antwerp. Anyị na-achọ ọrụ na-atụle ebe i bi ka i ghara ime-enweghị isi mmegharị. Part oge mmụta dị ike na na gburugburu Antwerp. Na-eme ka uche. Na Antwerp i nwere ọtụtụ ọrụ ebe ụmụ akwụkwọ nke akụkụ-oge agụmakwụkwọ nwere ike ịga. N'ihi na e nwere ọtụtụ ndị bi na-arụ ọrụ na Antwerp, ị ga-enwe ọtụtụ ihe omume ndị dị otú ahụ dị ka nwa ara na-obibi, kindergartens, ... Antwerp bụghị n'ihi na ihe ọ bụla na akụ na ụba obodo ukwu nke Flanders na e n'olu akụkụ oge mmụta Antwerp naanị ma-erite uru.
Ọrụ na akụkụ-oge MMUTA
Ị nwere ike itinye aka na ụdị ọrụ dị iche iche na Ụlọ Akwụkwọ Spectrum. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọrụ pụtara, mgbe ahụ, ọrụ mmemme ma ọ bụ ọrụ ụgbọ mmiri bụ ọrụ kwesịrị ekwesị na agụmakwụkwọ oge. Ozugbo i gosipụtara na ị maara ọrụ, anyị ga-achọ ọrụ ọ bụla.
A mgbe ọrụ pụtara na ị na-arụ ọrụ na a n'ezie na-arụrụ ọrụ na na ị ga-akwụ ụgwọ n'ụzọ zuru ezu. The ọhụrụ contracts e mere ndokwa nke mere na unu anọgide fiscally ndabere nke ndị mụrụ gị na i nwere ike na ụmụ gị ego.
The akụkụ-oge akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ na-dabeere mmụta akpatakarị a na-adịgide adịgide ọrụ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmemme niile anyị na-ahazi na-ejikọta na ụkọ ọrụ maọbụ na mpaghara ikuku. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị gụsịrị akwụkwọ, ị ga-enweta ọrụ dị mma. Ịchọta ọrụ anaghị adị mfe; ma ị bụghị naanị gị. Anyị na-enyere gị aka na ụzọ gị na mgbe mgbe ịchụsịrị ọzụzụ na oge agụmakwụkwọ oge ụfọdụ ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na nkwekọrịta na-adịgide adịgide n'ebe ọrụ gị.
Jiri niile ụmụ akwụkwọ, na-eto eto, ndị nkụzi na-elekọta ọrụ smart School. Onye ọ bụla na-eto eto na-enweta otu akaụntụ aha. Ọ bụ isi nkwurịta okwu ọwa n'etiti ụmụ akwụkwọ na ndị CDO.
Arụ ọrụ na-amụta bụ ihe ọzọ aha maka akụkụ-oge ọzụzụ
N'ezie, ọ dịghị mfe ọ bụla. N'ebe nkuzi nke oge-oge, mgbe ụfọdụ, anyị na-ekwu banyere ịmụ ihe; site na mmụta abụọ; ịmụta na-arụ ọrụ ...
Ndị a bụ ndị niile dị iche iche aha maka akụkụ-oge ọzụzụ.
The mkpa bụ na ijikọta ọrụ na mmụta na na site mmekọrịta a nwere ike aghọtazu a ọrụ ma ọ bụ a craft ka nta nkọwa.
Ịmụ ihe ma ọ bụ ọzụzụ oge-oge? Achọpụta akwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị mma n'ebe ọrụ gị.
NKWUKWU NDỊ NA-AHỤ N'ỤLỌ NDỊ NA-AKỤKWU NDỊ NA-AKỤKWU NDỊ ỌZỌ
Ụdịdị dị iche iche School ahazi akụkụ-oge ozizi na mmụta na sọrọ nso. na akụkụ oge ọzụzụ ikpokọta mmụta n'ụlọ akwụkwọ na-amụta na-arụ ọrụ. Ị ga-akwụ ụgwọ mgbe ị na-arụ ọrụ.
Na sọrọ mmụta bụ mesiri ike na-amụta na-arụ ọrụ. Ị nwere ike ma sọrọ mmụta na oge abụọ muta dị ka akụkụ-oge. The zuru ị dịghị ihe ga-akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ, akụkụ-oge ezie na. N'ihi sọrọ-amụta stricter n'ọnụ ụzọ chọrọ karịa akụkụ-oge ọzụzụ. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu banyere abụọ nhọrọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ihe dị iche na n'etiti abụọ na usoro, biko kpọtụrụ anyị. Anyị na-enyere gị na ụzọ gị.
> Mụtakwuo maka mmụta abụọ
Na-agụ anyị website ụdịdị dị iche iche School na gị onwe gị asụsụ.
Lelee mba nsụgharị nke ụdịdị dị iche iche-akwụkwọ mmụta na-arụ ọrụ.
Ndị a sụgharịrị na-eme site na kọmputa na ọ bụghị mgbe niile ezi. Otú ọ dị, readability nke odide na-ekwe nkwa.